Courses BIM - Geofumadas
Mianara famolavolana rafitra amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Advanced Steel Design. Mamolavola fananganana feno Fototra, tsanganana amin'ny bikan-kazo, antsipiriany Ny drafitra sy ny fatra Quantification Ny mpanazava dia manazava ny lafiny fandikana ny sary struktural sy ny fomba hanatanterahana azy ireo amin'ny maodely telo-habe. Ny fomba fananganana layout printy dia hazavaina ary takatra tsikelikely ...
Fianarana BIM Rafitra mandrindra BIM Revit courses
Toro lalana famolavolana azo ampiharina miaraka amin'ny maodely fampahalalana momba ny fananganana trano mifototra amin'ny famolavolana firafitra. Ataovy sary, volavola ary atorohy ireo tetikasanao amin'ny REVIT Ampidiro ny sehatry ny famolavolana miaraka amin'ny BIM (Modelling Information Modelling) Ampianaro ireo fitaovana fanaovana sary mahery vaika Mamorona modely anao Manondrana modely fanaovana kajy Mamorona drafitra rakitra ...
Mianara mampiasa REVIT MEP ho an'ny famolavolana ny fametrahana Sanitary. Tongasoa eto amin'ity taranja ity momba ny fametrahana Sanitary miaraka amin'i Revit MEP. Tombontsoa: Hanjakazaka hatramin'ny interface ianao ka hatramin'ny fananganana drafitra. Hianaranao amin'ny tena mahazatra, tena tetikasa 4-level fonenana. Hitari-dalana anao aho, tsy hieritreritra aho hoe mahalala zavatra momba an'i Revit, na momba an'i Sanitaria ianao. ...
Fianarana BIM Kilasy elektronika BIM
BIM Computational Design Ity fampianarana ity dia torolàlana mahafinaritra sy fampidirana ho an'ny tontolon'ny famolavolana computational mampiasa Dynamo, sehatra fandaharana misokatra ho an'ny programa ho an'ny mpamorona. Mandritra ny fandrosoana dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny tetik'asa izay hianarana ny foto-kevitra fototra amin'ny fandrafetana sary. Anisan'ireo lohahevitra hiatrehantsika ny sangan'asa amin'ny géometry ...
Fianarana BIM Rafitra mandrindra BIM Courses workflow
Manaova sary, famolavolana ary firaketana ireo tetikasanao momba ny rafitra miaraka amin'i Revit MEP. Ampidiro ny sehatry ny famolavolana miaraka amin'ny BIM (Modelling Information Modelling) Fitaovana fanaovana sary mahery vaika Manamboara paipy anao manokana Fikajiana ho azy ny savaivony volavola Rafitra fanamafisam-peo miorina amin'ny mekanika Mamorona sy manoratra ireo tamba-jotra elektrikao Miteraka tatitra mahasoa sy matihanina Asehoy ny ...
Fianarana BIM Kilasy elektronika BIM Revit courses
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Revit hamoronana tetikasa ho an'ny tranobe Amin'ity fampianarana ity dia hifantoka amin'ny fanomezana anao ny fomba fiasa tsara indrindra izahay hahafahanao mifehy ireo fitaovana Revit amin'ny fananganana modely amin'ny sehatra matihanina sy ao anatin'ny fotoana fohy. Hampiasa fiteny tsotra sy mora azo isika ...
Fianarana BIM Courts Architecture BIM Revit courses
Torolàlana fototra hamoronana simika mekanika ao anatin'ity programa fandalinana singa voafetra ity. Mihamaro ny injeniera mampiasa ny Modelers Solid miaraka amin'ny fomba singa voafetra hamahana ny olana isan'andro amin'ny fanjakana adin-tsaina, fiovana, famindrana hafanana, fikorianan'ny tsiranoka, elektromagnetisma, sns. Ity fampianarana ity dia manolotra fitambarana kilasy kendrena amin'ny ...
Famakafakana sy famolavolana tranobe mahatohitra horohoron-tany: miaraka amin'ny lozisialy CSI ETABS Ny tanjon'ny fampianarana dia ny hanome ny mpandray anjara fitaovana fototra sy mandroso amin'ilay programa ho an'ny maodely, ho tratra ny volavolan'ireo singa mifototra amin'ny tranobe ary hozahana ihany koa ilay trano miankina amin'ny drafitra antsipiriany, amin'ny fampiasana ...
Fianarana BIM Rafitra mandrindra BIM Fampianarana ETABS
Hevi-dehibe momba ny trano mivaingana, mampiasa ETABS Ny tanjon'ny fampianarana dia ny hanome ny mpandray anjara fitaovana fototra sy mandroso amin'ny programa ho modely, tsy vitan'ny hoe hahatratra ny endrik'ireo singa struktural ao amin'ilay trano ny trano, fa hofakafakaina ihany koa ilay trano ao fiasan'ny antsipiriany momba ny drafitra, amin'ny fampiasana ny ...
Mora toy ny mijery manam-pahaizana mamolavola trano iray - nohazavaina tsikelikely Mianara AutoDesk Avereno ny fomba mora. Amin'ity fampianarana ity dia hianaranao ireo foto-kevitra Revit tsikelikely rehefa mamorona trano ianao; Famaky mivaingana amin'ny planina sy ny haavony, fototra, rindrina ary vato fisaka, varavarana sy varavarankely, valindrihana, habe, antsipiriany ...
Amin'ity fampianarana mandroso ity dia asehoko anao tsikelikely ny fomba fampiharana ny fomba fiasa BIM amin'ny tetikasa sy fikambanana. Ao anatin'izany ny maodelim-panazaran-tena izay hiasanao amin'ny tena tetik'asa amin'ny alàlan'ny programa Autodesk hamoronana modely tena ilaina, hanatanterahana fanahafana 4D, hamoronana tolo-kevitra momba ny famolavolana hevitra, hamokarana metrikaika ho an'ny tombana amin'ny vidiny sy ...
Torolàlana feno amin'ny fampiasana ny Robot Structural Analysis ho an'ny modeling, ny fikajiana ary ny famolavolana rafitra vita amin'ny beton sy vy Ity fampianarana ity dia handrakotra ny fampiasana ny programa Robot Structural Analysis Professional ho an'ny modeling, ny fikajiana ary ny famolavolana ireo singa struktural amin'ny rafitra vita amin'ny beton mihamafy sy ireo tranobe indostrialy vy. Amin'ny taranja mikendry ...
Ianaro ny fomba fampiasana Revit, Robot Structural Analysis, ary Advance Steel amin'ny famolavolana rafitra ny tranobe. Ataovy sary, volavola ary atoraho ireo tetikasanao amin'ny REVIT Ampidiro ny sehatry ny famolavolana miaraka amin'ny BIM (Modelling Information Modelling) Ampianaro ireo fitaovana fanaovana sary mahery vaika Mamorona modely anao Manondrana ireo programa fanaovana kajy Mamorona sy manaova ...
Famakafakana sy famolavolana tranobe - Haavo ambaratonga zero hatramin'ny haavo mandroso. Ny tanjon'ny fampianarana dia ny hanome ny mpandray anjara fitaovana fototra sy mandroso amin'ny programa fandefasana modely, tsy vitan'ny hoe hahatratra ny famolavolana ireo singa firafitry ny trano ny trano, fa hozahana ihany koa ny trano miorina amin'ny drafitra feno pitsopitsony, ...